Wana Akafuridzirwa asi Usateedzere Mafomura | Martech Zone
Svondo, Kubvumbi 6, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rino ndiri kuverenga Starbucked, naTaylor Clark, ndichigadzirira iyo Indianapolis Business Book Club. Taylor Clark anovhura bhuku achitaura nezve Starbucks mazuva ekutanga uye kuti yaive yakavhura sei maziso apo Starbucks yakavhura Starbucks nyowani mhiri kwemugwagwa - uye zvitoro zvese zviri zviviri zvitoro zvakaburitsa muketani.
Izvo zvakandikurudzira kunyora iyi post nekuti ini ndinofunga kune 'akanakisa maitiro' asi zvechokwadi hapana mafomula pane akabudirira kushambadzira. Ini ndichave ndichinyora zvakawanda nezve izvi zve Zera reKukurukurirana 2, asi ini ndiri kukanganisika chaizvo ne 'maitiro ekubudirira' kutaura kwaunowana pawebhu rese. Ini ndinowanzo dzivisa kutsigira kana kushambadza mabloggi uye mablog anoedza kuyamwisa zvese pasi kuita fomula. Iko hakuna fomu.
Izvo zviripo paWebhu kune zvakawanda Kufuridzirwa!
Pamwe iyo chete nzira yekushambadzira ndeyechokwadi kusiyanisa zvese zvaunoita… nemamwe mazwi, dzivisa fomula. Ini ndakavaka manhamba akajeka eemail zvirongwa zvevatengi izvo zvinofanirwa kunge zvakapa zvakapetwa kaviri manhamba mumitengo yekupindura. Iyo data yaive yechokwadi, chidimbu chakange chisina marginal yekukanganisa, iyo kopi uye dhizaini zvaienderana neese 'mafomula', uye isu takatove nevamwe vakakurumbira avo vakakanda simba ravo uye zita / kuzivikanwa kumeso mhete - asi mushandirapamwe wakabhomba .
Nekutevera fomula, pakanga pasina chinhu chekusiyanisa mushandirapamwe kubva kumazana kana zviuru zveimwe mishandirapamwe yakatevera mirau imwechete. Saka - mushandirapamwe wakasimudzwa pamwe nemamwe ese ehurongwa hwekuratidzira, imomo mumarara.
Ita zvausingafaniri kuita. Usaite izvo zvaunoita
Sei munyika mabloggi aunze simba rakadai pawebhu? Vamwe vanhu vanofunga kuti imhaka yekuti ndiko kutora chikamu kukuru, mavhoriyamu akakura ezvinyorwa, uye hunyanzvi hunounzwa neblogger kune izvo zvirimo. Ndine chokwadi chekuti vane simba… asi handizvo zvese.
Chikamu chezvinhu zvinoita kuti blog inakidze zvikuru ndezvekuti hazviteedzere kune zvakajairika zvemapepanhau. Vamwe vanoblogi vanopinda mukati kati inorwa nemakwikwi. A blog pa kugadzira mablog emari nezvekudya kwakanaka. Ini dzimwe nguva ndinofarira kutaura nezvematongerwo enyika nekutenda (uye kazhinji ndinowana mhinduro dzine huturu).
Blogs dzinopa zvese zvirimo uye hunhu, chimwe chinhu chisingawanzo kuenderana kana zvasvika pakubatana kublogi.
Rangarira mukurumbira Snapple kushambadza kubva makore apfuura? Iko kushandiswa kwaWendy Kaufman, iyo Snapple Lady, kwakasunda kutengesa kwaSnapple kubva pamamirioni makumi maviri nematatu pagore kusvika pamamirioni mazana manomwe pagore muna23. Wendy aipindura tsamba dzevateveri kuna Snapple munguva yake, uye iyo agency yaifunga kuti ichave yakanaka nzira yekusimudzira iyo mhando. Kushambadzira kwaive kubudirira kukuru!
Quaker yakatora nzvimbo, Wendy akaregedzwa, uye zvese zvakaenda kaput… ichitevera fomula! Quaker yakazorega uye rega Snapple aende. Iye zvino Wendy ishamwari in Wendy Wear - pamwe nehukuru saizi yekupfeka yevakadzi, inosimudzirwa kuburikidza nebhurogu hongu!
Dzokera kunongedzo yangu - shandisa iyo webhu kuti uzvikurudzire uye uwane mazano matsva pane zviri kuitwa nevanhu kushambadzira zvigadzirwa zvavo. Usateedzere mafomula… kuyedza! Gadzira yako wega fomula!
Ndinofunga chirevo chekupedzisira - "Gadzira rako fomura!" - ndiyo inonyanya kukosha. Mune mutauro bhizinesi, inonzi Zvakanakisa Maitiro. Chaizvoizvo, tsvaga izvo zvinoshanda, tora iyo, uye wozoitora iyo seyakajairika mashandiro maitiro. Izvi ndizvo zvakaitwa naStarbucks.
Vakatora chidzidzo chaHenry Ford chekugadzirwa kwemazhinji, ndokuchishandisa kumagumo avo ("Unogona kuva neruvara chero rwaunoda, chero bedzi ari matoni epasi"), izvo zvakaita kuti vabudirire mupfungwa yekuti mari yakadonha, ivo vakakwanisa kudzora ruzivo rwevatengi, uye ita chete izvo zvinhu zvakaita kuti vabudirire pasina zvakawanda zvekufungidzira uye kuyedza zvinhu zvingangotadza.